Conte oo iska dhex arkay Bakayoko isla markaana doonaya inuu ku badelo Laacibkan.. – Gool FM
Valverde oo ka digay halista kaga imaan karta kooxda Eibar ka hor kulanka barri ee La Liga
Juventus oo ku dhow inay heshiisyo cusub ka saxiixato labo ka mid ah xiddigaheeda
Xiriirka kubadda cagta Spain oo go’aamiyay murankii ka taagnaa qabsoomida kulanka El Clasico
Conte oo iska dhex arkay Bakayoko isla markaana doonaya inuu ku badelo Laacibkan..
(London) 18 Jan 2018. Antonio Conte ayaa ugu dambeyn dulqaadkii ka dhammaaday isagoona diyaar u ah inuu la soo wareego xiddiga waqtiga dheer bartilmaameedka u ahaa Arsenal ee Jean-Michael Seri si uu ugu badelo booska xiddiga daalan ee Tiemoue Bakayoko.
Macallinka Chelsea ayaa taageero wayn u ah xiddiga qadka dhexe ee naadiga Nice kaa oo qarka u fuulay inuu ku biiro Barcelona suuqii xagaaga, si uu u xoojiyo dooqyadiisa qadka dhexe.
Si fiican ayaa loo diiwaan galiyay sida uu Bakayoko ugu dhibtoonayay Chelsea tan iyo sidii uu ugu soo biiray 40 milyan isagoo ka yimid Monaco, tababaraha reer Talyaani ayaana durba qorsheynaya sidii uu u badeli lahaa sida uu warinayo The Sun.
Blues ayaan kali ku ahayn qal qaalada ay ugu jirto Seri kaa oo qandaraaskiisa lagu bur burin karo 35-milyan oo bound, Man City iyo PSG ayaa sidoo kale gambar gaaban ugu fadhiya.
Waxaa la aaminsan yahay in 26-jirka uu doorbidayo inuu u soo dhaqaaqo Ingiriiska, Bar-dhammaadka xiddiga reer Ivory Coast ayaana noqon kara Stamford Bridge.
Conte ayaa durba bishan Janaayo qadkiisa dhexe ku soo kordhiyay Ross Barkley, balse waxaa weli ka go’an inuu ku soo daro quwad dheeri ah, Seri ayuuna u arkaa inuu badel toos ah u noqon karo xiddiga ay ka jajaban tahay ee Tiemoue Bakayoko.
Wenger oo ka hadlay suuqa kala iibsiga kooxdiisa Arsenal (Muxuu ka yiri Sanchez, Mkhitaryan, Aubameyang, Malcom iyo Ozil)